Yiziphi izinongo ezisetshenziswa kakhulu eNdiya? | Ukuhamba kwe-Absolut
maruuzen | | Kubuyekezwe ngomhla ka- 15/04/2021 11:35 | India
Umhlaba wezinongo uyamangalisa. Ngiyakuthanda ukuvula ikhabethe lami lasekhishini ngizwe iphunga elixutshiwe lezimbiza eziningi engizigcina lapho, kepha ngiyazi ukuthi azinakufaniswa izinongo ezisetshenziswa kakhulu eNdiya.
Yeka ukuthi kunephunga elimnandi kanjani emndenini waseNdiya! Umlomo wami uchela nje ngicabanga ngaleyo mibala namaphunga ... Uyayithanda i- Ukudla kwaseNdiya? Ngakho-ke, sizokwazi namuhla ukuthi yiziphi izinhlobo ezisetshenziswa kakhulu eNdiya.
1 I-India nezwe layo elimnandi
4 Igxolo leCassia
5 Upelepele omnyama
8 I-Nutmeg ne-mace
9 Imbewu yesinaphi
10 I-Fenugreek noma i-fenugreek
I-India nezwe layo elimnandi
La indian gastronomy Isebenzisa inqwaba yezinongo, umhlabathi futhi ungound, yodwa noma ihlanganiswe nabanye, ngakho-ke kwesinye isikhathi kungasabisa ukulinga ukwenza isidlo saseNdiya ekhaya. Kepha uma unokuzijwayeza okuncane futhi ukwazile ukubabona, uzobe usuvele uhambe ibanga elide.
Ochwepheshe bokudla kwaseNdiya bakusho lokho kunezinongo eziyi-11 ezisetshenziswa kakhulu ekudleni kwaseNdiya. Iningi lisetshenzisiwe yomile futhi ithosiwe ukuze bakwazi ukukhipha amafutha abo abalulekile ngaphambi kokuba agaywe futhi afakwe enhlanganisweni nezinye izinongo.
Yize ukusetshenziswa kosimende kungokwasendulo, namuhla sekulula futhi kuyalulekwa kakhulu ukusebenzisa irobhothi lasekhishini ukufeza ukugaya okuhle kakhulu. Ngabe ezinye izinongo, isibonelo i-cassia bark, zinzima kakhulu futhi ngodaka kunzima ukuzigaya.
Ukufunda ngezinongo kubalulekile ngoba ukushintsha inqubo yakho yokupheka kungenza uhlobo lube nokunambitheka okwehlukile, noma ngendlela efanayo, ukukubeka kwenye indawo ekulungiseleleni kuneminye imiphumela.
Ngokusobala kunezinhlobo eziningi eziningi, ezingama-40, hhayi nje eziyishumi nanye, kepha ezinye ziyivelakancane noma zisetshenziswa kuphela ezifundeni ezithile, ngokwesibonelo, imbali yamatshe. Ngakho-ke, singagxilisa iqembu elincane lezinongo ezibalulekile ezingama-24 ezivela kulo lonke ukudla kwaseNdiya nasemasikweni okupheka emakhulwini eminyaka adlule, futhi lapho singakwazi ukwenza elinye iqembu 11, esetshenziswa kakhulu.
Hay izitayela ezimbili ze-cardamom ezisetshenziswa gastronomy Indian: okuluhlaza nokumnyama. Okuluhlaza yikhona okuvame kakhulu futhi kusetshenziswa kakhulu kumxube yezinongo nakuma-dessert ajwayelekile kakhulu. I-cardamom eluhlaza inokunambitheka okukhanyayo, okumnandi, nenothi lika-eucalyptus elincane. Ingaxubana ngokuphelele lapho kwenziwa amamiksi, njengakwi-garam masala yakudala. Futhi, uma uyisebenzisa kuma-dessert namaswidi, imbewu evulekile ingasetshenziswa.
I-black cardamom inamandla kakhulu futhi iyabhema futhi yebo noma yebo kufanele uyisebenzise ngokunakekela. Zimbalwa izimbewu ezisetshenzisiwe futhi uma usebenzisa lonke udumba kufanele ulususe ngaphambi kokuphaka isidlo ngoba uma uluma, ubuhle bami.
Kubuye kube uhlobo lwakudala, nge umoya we-anise, iyabonakala kakhulu ezitsheni zaseNdiya. Ukunambitheka kwalo nephunga lalo livela emafutheni alo abalulekile aqinile, cishe okwelapha. I-clove yimbali futhi amafutha ayo ayacindezelwa futhi akhishwe ngaphambi kokusetshenziswa ekuphekeni.
Zingasetshenziswa ngokuphelele noma zixutshwe nezinye izinongo futhi akudingeki uqaphele kangako ngoba zimnene. Isitsha se-clove esijwayelekile yiKerala Coconut Curry Chicken.
Kuyaziwa nangokuthi china isinamoni, yize isinamoni ihlukile. ICassia kushibhile ukukhiqiza Futhi empeleni, iningi lesinamoni lomhlabathi olitholayo empeleni likhiqizwa ngegxolo le-cassia.
AmaNdiya asebenzisa ikasiya esikhundleni sesinamoni ukupheka, asebenzise ukunambitheka kwawo okunamandla, futhi awasebenzise kakhulu. Ingasetshenziswa futhi okusanhlamvu noma umhlabathi futhi kuhlanganiswe nabanye. Inokufana okungaguquki kunesinamoni futhi kulula ukuyibheka ukuthi isentsha noma cha: uma uyigcoba phakathi kweminwe yakho kufanele ukwazi ukuhogela iphunga lesinamoni uma lisentsha.
I-Mughlai paneer curry yenziwa nge-cassia crust.
Ngithanda upelepele omnyama. Ivela eNdiya, abavela ezifundeni zaseMalabar naseWestern Ghats. Iqiniso ukuthi yisinongo ukuthi kubiza kakhulu ukukhula ngoba kuncike kakhulu kwimvelo nasemijikelezweni yayo. Yingakho inamanani ahlala ehlukahluka.
Upelepele omnyama kufanele uwosiwe ngaphambi kokusetshenziswa futhi njalo, njalo, kungcono ukuthi ube nakho okusanhlamvu bese ukugaya kancane ngaphambi kokusetshenziswa. Kuhle kakhulu enkukhu yenkukhu yaseNdiya.
Ngithanda ikhumini, ikakhulukazi njenge-marinade yenyama yenkomo. Ikhumini esetshenziswa eNdiya iphelele noma ixutshwe nezinye izinongo futhi isetshenziselwa ukunikeza lelo thoni elibhemayo ezitsheni eziningi zamaNdiya. Imbewu yayo insundu futhi inephunga elimnandi kakhulu.
Kungcono ukusebenzisa ikhumini elisha uma sifuna ukunambitheka okukhulu. Ishisa kalula, ngakho-ke qaphela lapho uyosa. Uma lidlulisiwe, ikhumini liyababa. Okufanelekile kungamasekhondi angu-30 wokukhanyisa i-toast bese uvumela ukupholisa ngaphambi kokusebenzisa.
Ingenye yezinhlobo ezindala kunazo zonke ezaziwayo emhlabeni, nazo umbala wegolide, ukunambitheka kwawo ngandlela-thile kwewolintshi nokuthungwa kwayo okuncane. Izinhlamvu zeCoriander zisetshenziswa njengesisekelo sezingxube eziningi zezinongo, kepha i-coriander powder ingenye yezinhlobo ezisetshenziswa kakhulu ezitsheni zaseNdiya.
Njengasendabeni yekhumini, kufanele uthose i-toast kancane kuze kube nsundu ngegolide bese imbewu iqala ukugxuma kancane epanini. Inkukhu Tikka Masala is a classic.
Zombili zisetshenziswa kakhulu ku-Indian gastronomy. I-nutmeg entsha icutshungulwa ukuze kususwe ingaphandle nokususwa kwengubo. Ingaphandle eliqinile elimboza imbewu linganqamuka ngaphambi kokugaya bese liba mace. Okusho ukuthi, i-mace igobolondo le-nutmeg.
Uma yomile, ithola ithoni phakathi kwegolide ne-orange bese ingeza ukunambitheka okufudumele nokubushelelezi ekulungiseleleni. Ngakolunye uhlangothi, uma i-nutmeg isomile ihlala isikhathi eside ngakho-ke kuyalulekwa ngaso sonke isikhathi ukuyithenga okusanhlamvu bese uyigcoba ngqo kupuleti noma kulungiselelwa.
Akuvamile kakhulu ukusebenzisa i-nutmeg esevele ingumhlabathi ngoba uma igayiwe ilahlekelwa ngamandla, ngakho-ke kungani? Inyama ene-massaman curry ine-nutmeg.
Imbewu ingaba mnyama, nsundu noma phuzi futhi ithengiswa kabanzi ekudleni kwaseNdiya. Izinhlamvu zikhipha ukunambitheka kwazo lapho zigaywe noma ziphekwe emafutheni. Banambitha njengokubhema futhi zisetshenziswa kakhulu kuma-curry kanye ne-curry powders.
Futhi, uwoyela lwesinaphi usetshenziswa kakhulu ekhiqizweni laseNyakatho Indian.
I-Fenugreek noma i-fenugreek
Yizinhlobo ukuthi ayishodi eMadras curry powder. Kuyisici esihle kakhulu ngephunga nokunambitheka kwayo. Imbewu yalesi sitshalo iphuzi futhi yomisiwe futhi isetshenziswa njengesinongo, esivame ukubizwa kasurimethi.
Imbewu inamandla kakhulu ngakho-ke kufanele uqaphele ukusetshenziswa kwayo, njengama-clove. Zisetshenziswa nasemithini yesintu nakwisiraphu yomgunyathi yemephu etholakala eNdiya.
Kuvame kakhulu eNdiya, ingasetshenziswa entsha noma omisiwe. Inezinzuzo eziningi zezempilo futhi isetshenziswe kuma-curries nasezinhlanganisweni eziningi zezinongo. Inokunambitheka okunamandla okusha kunokwomile futhi ibala ngokwanele, ngakho-ke kufanele uqaphele lapho uyiphatha.
Inephunga elimnandi, lomhlaba futhi isetshenziswa ngamanani amancane ukunikeza ama-curry umbala wawo ocebile wegolide. Amaqanda e-Bhruji ane-turmeric kuwo.
Sesiyazi, yizinhlobo ezibiza kakhulu emhlabeni. Kubaluleke ngaphezu kwegolide ngesisindo sayo futhi uma uzibuza ukuthi kungani, kungenxa yokuthi kuthatha umsebenzi omningi ukukhiqiza. I-saffron enhlamba yezimbali zesafron futhi kufanele ikhuliswe ngesandla.
Isafron engcono kakhulu ebomvu ebomvu futhi ivela eSpain, e-Iran noma eKashmir. Kupholile, kujulile ukuthi umbala obomvu ungakanani. Inokunambitheka okuhlukile, kepha iphunga liyahluka kuye ngamakhala ngalinye. Kwabanye kuyinto ezimile, kwabanye inezinothi zoju ... Noma kunjalo, isafroni linamandla futhi lisetshenziswa ngamanani amancane. ngokuvamile ichitheka kuqala emanzini noma obisini.
Ngabe unesibindi sokudlala ngalezi izinongo zaseNdiya ekhishini lakho?
Indlela ephelele ye-athikili: Ukuhamba kwe-Absolut » Yiziphi izinongo ezisetshenziswa kakhulu eNdiya?